भाइरस सजीव कि निर्जीव प्रमको वाणीले निम्त्याएको रमाइलो बहस – Nepalpostkhabar
भाइरस सजीव कि निर्जीव प्रमको वाणीले निम्त्याएको रमाइलो बहस
nanda । ७ बैशाख २०७७, आईतवार १२:५० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाइरस निर्जीव भएको भनी बताएको भिडियोले यतिखेर खुब चर्चा पाएको छ । सिंहदरवारस्थित एक्सन रुमबाट गत चैत्र २९ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग कुराकानी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त कुरा भनेका थिए । अहिले बाहिर प्रकाशमा आएको १ मिनेट ४३ सेकेण्डको उक्त भिडियो क्लिपमा प्रधानमन्त्रीले निम्न कुरा भनेको सुनिन्छ ।
त्यसयता प्रधामन्त्रीले भिडियोमा मास्क लगाउनेबारे, चश्मा लगाउनेबारे र सर्ने विधिका बारेमा उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा रमाइलो बहस सिर्जना भएको छ । वैज्ञानिक समाजवादी अभियानका संयोजक तथा राजनीतिक चिन्तक आहुतिले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ?
उनकै भनाइमा टिप्पणी गर्दै नेकपा मसाल निकट अखिल छैठौंका नेताले लेखेका छन् । त्यो प्रधानमन्त्रीवाला भाइरसको कुरा गर्नुभएको हो भने भाइरस निर्जीव नै हुन्छ है दाजु ? तिनले ठीकै भनेका छन् । साबुनपानीले हात धुने कुरा छुटाएका छन् । अरु ठीकै छ । भाइरसमा जीवहरुमा हुने गुणहरु हुँदैन ? हामीले त्यही पढ्या हो क्यारे ?
जनस्वास्थ्यविद् समीरमणि दीक्षितले एक ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइको विपक्षमा आफ्ना भद्र असहमति राखेका छन् । उनले लेखेका छन् ।
भाइरस जीव कि निर्जीव विवादित र थुप्रै बहस गरिएको विषय म चाहिं जिवित भन्छु किनभने १ बिभाजनको मद्दतले आफ्नो अस्तित्व जोगाउने ुजिनु लाई निरन्तर्ता दिन्छ २ मानव, जनावर प्रतिरोधलाई छल्न निरन्तर कोशिस गर्छ, म्युटेशनु को मद्दतले ३ केही रासायनद्वारा नस्ट हुन्छ । विज्ञानका अध्येता तथा युवा लेखक विकास बस्नेतले चाहिँ आफ्नो फेसबुक वालमा रमाइलो पाराले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले लेखेका छन् ।
भाइरसलाई सजीव वा निर्जीव दर्जामा राख्ने भन्ने विषयमा हिजोबाट शुरु भएको यस वादविवाद प्रतियोगितामा म दुधभातु पक्षबाट बोल्न गइरहेको छु ।
आश्रय कोष(होस्ट सेल) नभेटेसम्म भाइरसले आफ्नो वृद्धि र बिस्तारका लागि उर्जा प्राप्त गर्न सक्दैन ? तबसम्मका लागि यसको जीवन स्थगितु हुन्छ । प्रजाती हेरेर केही घण्टादेखि बर्षौंसम्म यो ट डाउनु मोडमा पुग्छ । यसको आफ्नो स्वतन्त उर्जा दोहन संयन्त्र मेटाबोलिजम हुँदैन, यसको वृद्धि, बिस्तार र गतिशीलता हुँदैन ।अब यसलाई मृत माने पनि हुन्छ ।
तर आश्रय कोष भेटने बित्तिकै यसले आफ्नो जेनेटिक सामग्री (डीएनए आरएनए) को पोको त्यही आश्रय कोषमा खन्याउँछ र त्यही कोषलाई आफ्नो बिस्तार र वृद्धिको लागि प्रोटिन र न्युक्लिक एसिड बनाउन लगाउँछ । आश्रय कोष भेटेको केही घण्टामै यो भाइरलु हुन्छ ।
आश्रय लिएको कोष यसको वातावरण हो । अन्य प्राणी झैँ आफ्नो वातावरण दोहन गरेर वृद्धि र बिस्तार हुनु जीवन हो भने जीवित ठाने पनि हुन्छ ।
खासमा यसका विज्ञहरु चाहिँ यस विषयमा भिड्न छाडिसके ? किनभने रसायनिक प्रतिक्रियाहरुको जोड घटाउ र जीवन बीच केबल परिभाषाु को भिन्नता छ ?
सायद भाइरस जीवन र अजीवन बीचको मिसिङ लिंक हो
विज्ञान लेखक तुल्सीदास महर्जनको विचारमा चाहिँ भाइरसलाई निर्जीव र जीवबीचको बस्तुको रुपमा लिनु सही हुन्छ । रातोपाटीमा प्रकाशित एक लेखमा उनले यसो भनेका छन्
भाइरसलाई हामी जीव नै मान्छौं । तर, यसले जीवजस्तो रुप र व्यवहार तब मात्र देखाउँदछ, जब यसले कुनै जीवको जीवकोषभित्र प्रवेश पाउँछ । होइन भने यसको रुप न जीवजस्तो देखिन्छ न त यसले जीवको व्यवहार नै देखाउँछ । हामीले अहिलेसम्म बुझेको मान्यताअनुसार सामान्यतः जीव हुनलाई कम्तिमा श्वासप्रश्वास (अक्सिजन लिने र कार्वनडाइअक्साइड शरीरबाहिर फाल्ने) गरेको हुनुपर्छ, खाना खाएको हुनुपर्छ, निश्कासन गरेको हुनुपर्छ र सन्तान उत्पादन गरेको हुनुपर्छ । तर भाइरसले कुनै जीवको जीवकोषभित्र प्रवेश नगर्दासम्म यी कुनै क्रियाकलाप गर्दैन । जीवकोषभित्र प्रवेश गरेपछि पनि यसले आफैंलाई फोटोकपी गरेजस्तै गरी संख्याबृद्धि गर्नेबाहेक गर्नेबाहेक माथि उल्लेखित अन्य कुनै क्रियाकलाप गर्दैन । अनि यसलाई कसरी जीव भन्ने त तर, यसले जीवकोषभित्र आफैंलाई बृद्धि गर्ने भएकोले जीव नभन्न पनि मिलेन । निर्जीव भए त संख्या बृद्धि गर्दैनथ्यो । यी कुराहरुले गर्दा भाइरसलाई निर्जीव र जीवबीचको वस्तुको रुपमा लिनु नै सही हुनेछ ।
व्यंग्यचित्रकार रवि मिश्रले चाहिँ रमाइलो पारामा आफ्ना ट्वीटमा यस्तो लेखेका छन् । बोसिय विशेषज्ञ, फ्याक्टोलोजिस्ट डा खड्गप्रसादलाई कोरोनाभाइरस जचाउन गयो भने टेकु पठाइदेलान् कि तिलगंगा
खड्गप्रसाद अघिअघि महेन्द्र र मुकुन्देको फ्युजन थिए । पछिल्लो कोरोना भाइरसको डक्टरी प्रवचनमा उनमा टिकटक भाइरल अघोरीबाबा को नि संक्रमण देखियो ।
भाइरस सजीव वा निर्जीव भन्ने कुरा विज्ञानको क्षेत्रमा लामै विवादित विषय भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारेमा बोलेको भिडियोले केही समयका लागि सामाजिक सञ्जालमा राम्रै स्थान र चर्चा पाउने देखिएको छ रातोपाटीमा यो विश्लेषण छापिएको छ ।